घुम्टे लेकमा गुराँस उत्सव सम्पन्न ! – ebaglung.com
घुम्टे लेकमा गुराँस उत्सव सम्पन्न !
२०७४ बैशाख २, शनिबार १९:०७	Top News, थप समाचार
बालकृष्ण सुबेदी ,गलकोट २०७४ बैशाख २ । नयाँ वर्षको अवसरमा गलकोटको पर्यटकिय घुम्टे लेकमा आयोजना गरिएको गुराँस उत्सव सम्पन्न भएको छ । गलकोट घुम्टे पर्यटन विकास केन्द्रको आयोजनामा प्रत्येक वर्ष गुराँस उत्सव आयोजना गर्ने गरिएको हो । गुराँस फुलको संरक्षण र घुम्टे लेकमा पर्यटन पर्वदनको लागि विगत पाँच वर्ष देखि उत्सब मनाउन थालिएको हो । घुम्टे लेकलाई गुराँसको पहाड घोषणा गर्न र बैशाख १ गतेलाई राष्ट्रिय गुराँस दिवस घोषणा गर्न केन्द्रले सरकार सँग माग गर्दै आएको छ ।
धार्मिक ,प्राकितिक र जैविक दृष्टिकोणले महत्व पुर्ण घुम्टे लेकको पर्यटकिय विकास र प्रर्वदनको लागि गुराँस उत्सवले टेवा पुग्ने ठानिएको छ । गुराँस उत्सवको अवसरमा केन्द्रले क्याम्प फायर ,नौमति बाजा ,सालैजो ,झाम्रे लगाएतका सास्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
धार्मिक दृष्टिकोणले परापुर्व कालदेखि नै पुजाआजाको लागि भक्तजन पुग्ने घुम्टेमा पछिल्ला पाँच वर्षमा पर्यटन विकासको लागि उल्लेखीय कामहरु अघि बढेका छन् । यहाँ रहेका सिद्ध र भैरबको पुजा गर्न हजारौ भक्तजन घुम्टे पुग्ने गरेका छन् । केहि वर्ष अघि सम्म चण्डिपुर्णिमामा मात्रै पुजा आजा हुने गरेपनि अहिले भने वर्षभरी नै पुजाको ब्यबस्था मिलाइएको छ ।
साउन र माघ महिना बाहेक अन्य समयमा उत्तम तिथीमा पुजा गर्ने ब्यबस्था गरिएको पुजारी तथा गलकोट घुम्टे पर्यटन विकास केन्द्रका अध्यक्ष झँकबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
१० हजार ९ सय ९३ फिटको उचाईमा अवस्थित सिद्ध भैरबको पुजा गर्नको लागि बागलुङ जिल्ला संगै छिमेकी जिल्लाहरुबाट समेत भक्तजन आउने गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए ।
घुम्टेलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तब्य बनाउनको लागि पर्यटन केन्द्र मार्फत करिब १ करोड रकम बराबरको पुर्वाधार निर्माण गरिएको छ । घुम्टे लेक सम्म पुग्नको लागि पर्यटकिय पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । मन्दिर देखि केहि तलबाट स्लेट ढुङगाको सिडी र रेलिङ लगाएर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ ।
पदमार्ग निर्माण संगै अब मन्दिर बनाउने योजना रहेको केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राज थापाले जानकारी दिए ।
घुम्टे लेकमा मल्म आँगाखेतका बसन्त केसीको १ लाख २० हजारको सहयोगमा सेन्सर सोलार लाईट जडान गरिएको छ । घुम्टेको पर्यटन प्रर्वदनको लागि गुरुयोजना बनाएर जिल्लाकै उत्कृष्ट गन्तब्य बनाईने केन्द्रले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउन विभिन्न सुरक्षा योजना अपनाईने !
स्थानिय चुनाबको खारेजीको माग गर्दै बुर्तिवाङमा नेकपा बिप्लबको प्रतिरोध अभियान !